December 2015 - Page2of2- BuzzFeed Myanmar
Lemon ဖျော်ရည်အပူအားသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ၀ိတ်ကျပြီး နုပျိုလန်းဆန်းစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ Daily Mail ကဆိုပါတယ်၊ လီမွန်သီး (ရှောက်ချိုသီး) မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီကြောင့် ကော်လာဂျင်ထုတ်လွှတ်မှုအားကောင်းစေပြီး အသားအရေကိုနုပျိုစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ အဲ့ဒီအပြင် Metabolic ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းစေတာကြောင့် သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ ကိုလက်စ်ထရောကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လီမွန်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီဟာ antioxidants ပါဝင်တာကြောင့် နေရာင်ခြည်မှာပါဝင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကျရောက်မှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို တိုက်ဖျက်တားမြစ်ပေးပြီးအသားအရေကို နုပျိုစေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၊ လီမွန်သီးဖျော်ရည်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ အဆီအပိုတွေကိုဖယ်ရှားတားဆီးပေးတဲ့အပြင် သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုလက်စ်ထရောကိုလျှော့ချပေးတာကြောင့် ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကိုထိန်းညှိပေးပြီး အဆီတွေကိုလျှော့ချပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၊ တခြားလီမွန်သီးရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကတော့ အမောအပန်းခံနိုင်အောင် စွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေကိုတားဆီးပေးနိုင်ခြင်း၊ ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဦးနှောက်အားကောင်းစေပြီး သွေးဖိအားကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း၊ လန်းဆန်းစေတာကြောင့် အသက်ရှူ ရှိုက်ရာမှာ အားကောင်းစေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ လီမွန်သီးဖျော်ရည်ကိုမနက်တိုင်းသောက်ပေးပြီးကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ Blue Lion – သစ်ထူးလွင်Ref : Dailymail
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ရိုးရာဆေးနည်းတစ်ခုဟာ ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်လောက်အောင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို ကုသရာမှာ အဓိကသော့ချက်ကို ဆောင်ထားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရှိရပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ တခြားကုသမှုတွေတောင် မပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ အိပ်ရာပေါ်အကြာကြီး လှဲနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာတွေ၊ ခြေထောက်ပြည်တည်နာတွေအပြင် ခြေလက် ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ နေရာက အနာဒဏ်ရာတွေမှာ အဖြူရောင်သကြားမှုန့် ကို အုံပေးခြင်းက အနာကျက်မှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေတာကို လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သကြားဟာ အနာက ရေဓာတ်ကို ပတ်တီးထဲစုပ်ယူပေးကာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဟာ အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် ရေလိုအပ်တာကြောင့်၊ အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘဲ၊ အနာကျက်မှုဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကို Wolverhampton တက္ကသိုလ်က သက်ကြီးသူနာပြုပညာရပ် ကထိက Moses Murandu ဆိုသူက ဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Zimbabwe နိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်အခါက […]
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ အပူချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပါပြီ။ မနက်ပိုင်းဆို သိသိသာသာကို ချမ်းအေးတဲ့အရသာကို စတင်ခံစားရပြီပေါ့။ ဒီတော့ သင့်အသားအရည်အတွက် စတင်ဂရုစိုက်ရတော့မယ် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်တွေမှာလည်း နွေးနွေးထွေးထွေး သက်သက်သာသာလေး နေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အနားပေးပါ။ ဒီရာသီဟာ ကိုယ့်အတွက်ကို အချိန်ပေးပြီး သေချာအနားယူသင့်တဲ့ ရာသီပါ။ မိသားစုတွေ ဆုံတွေ့သင့်တဲ့အချိန်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်ပေး တွေ့ဆုံသင့်တဲ့အချိန်၊ ခရီးတွေထက်သင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကဲ ဒီတော့ ဒီရာသီမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့ အချက်လေး (၅)ချက်ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အရာလေးတွေကိုလည်း သင်ခံစားပျော်ရွှင်တတ်ပါစေ။ သင့်ရဲ့ အားလပ်ရက်တွေကို သေချာကြည့်ပြီး အိမ်မှာအေးဆေးနေ၊ အခွေတွေကြည့်၊ အိပ်ယာထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်ဖို့ အချိန်လေးတွေ သေချာရှာထားလိုက်ပါ။ သင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာလေးတွေမှန်သမျှဟာ သင်ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ကျေနပ်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ဖို့သာ […]
ငါးသေတွေကို မျက်နှာမှာကပ်ပြီး အလှဖန်တီးခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ် ပညာရှင်
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ရှိသည့် မိတ်ကပ်ပညာရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် ငါးသေများကို မျက်နှာတွင် ကပ်ပြီး ဖန်တီးတီထွင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အကြင်နာတရား ကင်းမဲ့သူ အဖြစ် ဝေဖန်ခြင်း ခံရကြောင်း သိရသည်။ ငါးသေကို အလှပြင်ရာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် လူမှု ကွန်ရက်များတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မော်စကိုမြို့တွင် နေထိုင်သည့် ဘူလိုချာကာသည် အလှမွေး ငါးသေများကို မျက်နှာတွင်ကပ်ပြီး အရောင်အသွေး စုံလင်သည့် နီယွန်များဖြင့် အလှဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဘူလိုချာကာသည် Followers (၂၅၀၀၀) ကျော် ရှိသည့် အင်စတာဂရမ်တွင် ဓာတ်ပုံများကို ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဝေဖန်မှုမျိုးစုံ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဝေဖန်သူများက ယင်းအပြုအမူသည် အနုပညာ မဟုတ်ကြောင်း၊ တိရစ္ဆာန်များကို […]
မျက်နှာခွဲစိတ် အစားထိုးကုသမှုတွေက အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်မှာ သုတေသီတွေဟာ မျက်နှာအစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ထားသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရိုးဖွဲ့စည်းပုံပေါ် မူတည်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါသတဲ့။ ဆရာဝန်တွေက ခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူးတဲ့။ “မျက်နှာအစားထိုးခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဒီလို ပြုပြင်ကုသပြီးတဲ့နောက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်တွေကို လေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အစားထိုးကုသမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့ မျက်နှာတွေဟာ ဘာလို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိုမင်းရင့်ရော်သွားကြတယ်ဆိုတာကို လေ့လာခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားမသိရသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုအိုမင်းရင့်ရောတာတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်တန့်သွားမလဲ? ဒါဟာ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ အရာတွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်က လက်မခံတဲ့ လက္ခဏာတွေလား? ကျွန်တော်တို့ လေ့လာချက်မှာလည်း သိပ္ပံပညာမှာ တွေ့နေကျ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထွက်လာတော့တာပေါ့ ” လို့ […]
မှန်ကန် တဲ့ အစားအသောက် တွေ စားသုံးခြင်းက စလို့ သေချာတဲ့ Positionတွေ အသုံးပြုခြင်းအထိ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး ကို အသုံးပြုပြီး ဇနီးမောင်နှံ တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေး ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ သိပ်တော့မထိရောက်လှပါဘူး။ ကလေး ရယူဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် ကလေးရစေနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းကတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သုတ်ပိုး အားကောင်းလာပြီး မျိုးပွားနိုင်နှုန်း မြင့်မား လာသည်အထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လန်ဒန်မြို့က North Middlesex ဆေးရုံက သုတေသနအသစ်တစ်ခု က ဆွေးနွေးတင်ပြလာတာကတော့ တစ်နာရီအတွင်းမှာ ၂ ကြိမ်တိုင် ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို […]